डा. चित्रप्रसाद वाग्लेले छोडेको अस्पताल जुर्मुरायो ::जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
डा. चित्रप्रसाद वाग्लेले छोडेको अस्पताल जुर्मुरायो
वर्षमा खोला पनि र्फकन्छ,’ भने झैँ लामो समयदेखि भताभुङ्ग अवस्थामा रहेको जिल्ला अस्पताल अर्घाखाँचीमा पनि सुधारका संकेत देखिन थालेका छन् । अर्घाखा“चीमा १२ वर्ष सेवा गरेका स्वर्गीय डाक्टर चित्रप्रसाद शर्मा वाग्लेको अनुपस्थितिमा भताभुङ्गजस्तै भएको अस्पताल पछिल्लो समय सुधारोन्मुख भएको छ । स्वर्गीय डाक्टर वाग्लेले अध्ययनका लागि विदेश जानेबेला सो अस्पताल छोडेका थिए । त्यसपछि नयाँ–नयाँ डाक्टर आएपछि बिरामीको संख्या घटेर बेडमा कुकुरसमेत सुतेको समाचार बाहिर आइरहेको थियो । तर अहिले भने अस्पतालमा बिस्तारै चाप बढ्न थालेको छ । २ वर्ष अगाडीजस्तै बेडको अभावमा भुँईमा राखेर बिरामी जाँच्नु पर्ने अवस्था आउन थालेको छ ।
सन्धिखर्क–६ का तेजबहादुर रायमाझी नया“ डाक्टर आएपछि राम्रो हँुदै गएको थाहा पाएर आफूले बिरामी जिल्ला अस्पतालमा ल्याएको बताउँछन् । बिरामी जाँच्ने, राम्रो सल्लाह दिने र उपचार गर्ने गरेको पाएको रायमाझीले बताए । ‘केही समय अघिसम्म बिरामी ल्याउँदा डाक्टर नहुने, बिरामीलाई कसैले वास्ता नगर्ने, जताततै फोहोर हुने, रातीमा लाईट नहुने तथा कति बेला कुकुरले टोक्ने हो भन्ने डर हुन्थ्यो,’ बिरामी कुरुवा हंसपुरका टिकाराम पन्थी भन्छन्–‘अहिले सबै समस्या हल भएछ ।’
विगत ६ महिनायता दैनिक ओपिडी र इमरजेन्सीमा गरी ६०÷७० जना बिरामी आउने गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अर्घाखा“चीका प्रमुख डाक्टर कृष्णहरि सुवेदीले जानकारी दिए । अस्पतालको ५÷६ महिना अगाडिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने दैनिक ८ देखि १० जना बिरामीमात्रै आउने गरेका थिए । अहिले भने तेब्बर वृद्धि भएको छ । यसअघि कर्मचारीहरुबीच नै राम्रो तालमेल नभएको गुनासो आउने गरेको थियो । तर अहिले भने यस्तो गुनासो विस्तारै कम भएको छ । अस्पतालको बिग्रिएको छबी पुनः फर्काउन आफूहरु लागिपरेको डा. नबिन दर्नाल बताउँछन् । उनको दावी जस्तै बिरामीहरु पनि सेवाप्रति सन्तुष्ट छन् । सहजै उपचार र प्रभावकारी सल्लाह पाउने गरेकाले अस्पतालले नयाँ जीनव पाउन थालेको आभास भएको एक बिरामीले बताए ।
डाक्टर सुवेदीका अनुसार ४ जना डाक्टरको दरबन्दीमा १, ल्याब टेक्निसियनको ३ दरबन्दीमा २, रेडियोग्राफीको १ दरबन्दीमा १, पनेसुको १ दरबन्दीमा १, एचएको २ दरबन्दीमा १ र स्टाफ नर्सको ४ दरबदीमा १ पदपुर्ति गर्न बाँकी रहेको छ । बिरामीको चापले गर्दा बेडको अभावमा भूईंमा राखेर जाँच्नु परेको डाक्टर सुवेदीको भनाई छ । सुवेदी जिल्लामा आएको करिब ६ महिना हुँदैछ । अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी हुने हो भने अझै प्रभावकारी सेवा दिन सकिने डा. लक्ष्मण शर्माले बताए ।